Ngaba UMtyholi Ukho Ngokwenene? | Imibuzo YeBhayibhile
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAssamese IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBislama IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiFaroese IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikamba IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKorea IsiKyangonde IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaltese IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOssetia IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Ewe ukho. ‘Ungumlawuli wehlabathi,’ isidalwa esingabonakaliyo esenza izinto ezingathandwayo nguThixo. (Yohane 14:30; Efese 6:11, 12) Xa ithetha ngoMtyholi, iBhayibhile isebenzisa la magama:
USathana, othetha “uMchasi.”—Yobhi 1:6.
UMtyholi, othetha “uMhlebi.”—ISityhilelo 12:9.
Inyoka, eBhayibhileni ethetha “uMlukuhli.”—2 Korinte 11:3.
USathana akayongcinga nje embi
Abanye bathi uSathana uMtyholi yingcinga nje embi engaphakathi emntwini. Noko ke, iBhayibhile ithetha ngencoko eyayiphakathi kukaThixo noSathana. UThixo ufezekile, ngoko ke wayengenakuthetha nengcinga embi engaphakathi kuye. (Duteronomi 32:4; Yobhi 2:1-6) Ngokufanayo uSathana wahenda uYesu ongenasono. (Mateyu 4:8-10; 1 Yohane 3:5) Ngoko, iBhayibhile ithi uMtyholi ukho ngokwenene, akabobubi nje.
Ngaba ifanele isimangalise into yokuba abantu abaninzi bengakholelwa ukuba uMtyholi ungumntu wokwenene? Nakanye, kuba iBhayibhile ithi uSathana uyalahlekisa ukuze afeze iinjongo zakhe. (2 Tesalonika 2:9, 10) Elinye lawona maqhinga akhe aphambili kukumfamekisa abantu abaninzi ukuze bangamqondi ukuba usisidalwa esikhoyo.—2 Korinte 4:4.
Ezinye izinto ezicingelwayo ngoMtyholi
Ubuxoki: Elinye igama lakaMtyholi nguLusifa.
Inyani: Igama lesiHebhere eliguqulelwe ngokuthi “Lusifa,” kwezinye iiBhayibhile zesiXhosa lithi “wena ukhanyayo.” (Isaya 14:12) Umongo wale vesi ubonisa ukuba eli gama libhekisela kubukhosi baseBhabhiloni, uThixo awayeza kubuhlazisa ngenxa yekratshi. (Isaya 14:4, 13-20) Xa kwakusithiwa “wena ukhanyayo” kwakuhlekiswa ngobukhosi baseBhabhiloni obabubhukuqiwe.
Ubuxoki: USathana “ngumtshutshisi” osebenzela uThixo.
Inyani: UMtyholi lutshaba lukaThixo, akamsebenzeli. USathana uMtyholi uyabachasa aze abamangalele ngobuxoki abantu abakhonza uThixo.—1 Petros 5:8; ISityhilelo 12:10.
Kukho iindlela ezine uThixo anokukukhusela ngazo kuSathana.